Guri la’aanta - InfoFinland
Nolosha Finland > Deganaanshaha > Guri la’aanta
Haddii anad lahayn guri joogto ah anadna ahayn qof guri u kiraysanhay waxad noqonaysaa qof bilaa guri ah. Finland degmooyinku waxay u fidiyaan adeegyo dadka anan guryaha lahayn. Adeegyadaas waxa loogu talo galay dadka ku leh degmo Finland.
Haddii ad noqoto qof bilaa guri ah, waxad la xidhiidhaa xaafiiska adeega bulshada ama xarunta adeegga bulshada ee degmadaada. Halkaas waxad ka heli kartaa caawimaad markaad raadsanayso guri ama meel ad hoy ka dhigato mudo gaaban. Hoyga muddada kooban waxay noqon karaan guryo u gaar ah dadka noqday bilaa guri. Xaaladaada u faahfaahi shaqaalahaaga adeegga bulshada oo kala hadal inta ad kiro ama ijaar bixin karto iyo in aad caawimaad ka heli karto ku wajahan bixinta kirada. Waxad sidoo kale talo waydiisan kartaa xafiiska adeegga la talinta dadka dalsoogaleetika ah ee ku yaala dagmadaada.
Bogga InfoFinlandi Guri kiro waxad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan sida ad u heli karto guri kiro ah. Xaaladda helidda guryaha kiradu way ku kala duwantahay degmooyinka. Tusaale ahaan degmooyin badan oo yaryar ayaa laga heli karaa guryo kiro ah. Caasimadda iyo nawaaxigeeda waxa dhici karta in ay adkaato sida guri looga helaa.
Waxad sidoo kale talo iyo caawimaad waydiisan kartaa ururka la yidhaahdo Vailla vakinaista asuntoa ry (urur caawiya dadka guri la’aantu ku dhacday). Ururkaas waxa laga heli karaa talo, garabsiin iyo hagitaan ku saabsan arrimaha guri helida ku saabsan waana urur iskudayay in uu horumariyo xaaladaha dadkagui la’aantu qabsatay.
Meelaha dadka lagu hago, ee la yidhaahdo Ohjaamo, waxad ka heli kartaa la talin iyo hagitaan ku socda dhalinyarta bilaa guryaha ah.
Haddii anad si joogto ah ugu dagganayn Finland
Xarunta habeenkii ee KalkkersFinnish | Ingiriis
Warbixin sharci laawahaFinnish | Ingiriis | Faraansiis | Carabi
Haddii uu gurigaagu wax kaa noqdo
Haddii ad leedahay caymiska guryaha, gurigaaguna uu wax kaaga noqdo dab ama ay biyo galaan, sida ugu dhakhsiyaha badan ula xidhiidh shirkadaada caymiska. Waxa suuro gal ah in shirkada caymisku ay kaa bixiso kirada guriga ku meel gaadhka ah.
Haddii ad awoodi waydo in aad bixiso kiradaada
Haddii ay ku haystaan dhibaatooyin dhaqaale, waxa markasta laguu qaatay inaad bixiso marka hore kiraadada markaas kadib ad bixiso biilashaada kale. Haddii ad awoodi waydo in aad kiradaada bixiso la hadal shirkada ama shaqsiga guriga kaa kireeyay, kana codso wakhti siyaado ah oo ad ku bixin karto kiradaada. Ka akhriso macluumaad dheeri ah bogga InfoFinlandi Dhibaatooyinka dhaqaale.
Bogga InfoFinlandi Kaalmada ijaarka waxad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan taakulaynta kirada ee Kelada.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 21.09.2021 Boggan war-celin ka soo dir